Wax Kabaro Cilmiga Dhaqaalaha - Diblomaasi
Related Topics:FalanqeynVideoWax Kabaro Cilmiga Dhaqaalaha
Malaga yaabaa aqristow adigane su’aashaan in aad sidaan uga jawaabi lahayd!, haddii uu qofku u fahmo in qofnimadiisa ey kufilantahay “Waa qof shaqeysta oo reer leh” hadaba aan ogaanno si-kaduwan sidaas ayaa jirta, waana qofnimada dhabta ah taas oo ah in qofku uu noqdo “Qof wax anfaca” qof kawar qaba shaqada uu qabto, maxay faa’iido uleedahay bulshada uu lanool yahay, qof kafakiraya caruurta uu dhalayo (Haddii uu Alle siiyo) in ey noqdaan haldoorka bulshada, qof dhisaya danta guud sida misaajidda, goobaha waxbarashada, qof deegaankiisa nabaddoon u ah oo kawarqaba eeriyada (dariska) uu daggan yahay dadka ku dhibaateysan sida gaajada, caruur waxbarasho la’aanta, ama qof xanunsan” Iyo intaan kabadan.
Haddii aanan laqorsheyn cidda aan rabno in aan noqonno mustaqbalka, guud ahaan madhismeyso bulshada, gaar ahaanna masoo saari karno caruur haldoorra ah, tan ugu daranna waa in aan dunida ka tageyno annaga oo aan waxbadan kaqaban?
Maxamed Xassaan Gacayte
Waxaan rajeynayaa inaad in badan maqashay xisaabaadka ganacsiga. Xisaabaadka ganacsiga oo afka ingiriiska lagu yiraahdo “business accounting”. Mawduucaan wuxuu ku saab-sanyahay qeybaha ama noocyada ay u kala baxaan xisaabaadka ganacsiga “Business accounting”.
Waxaa jira wax loo yaqaano buugg-haynta ganacsiga oo afka ingiriiska lagu yiraahdo “bookkeeping”. U jeedada koowaad ee buugg-haynta xisaabta waa in lagu keediyo dhammaan maaliyada ganacsiga. Buugg-haynta waxaad ka heli kartaa dhammaan sidda ay wax u dhaceen haddii ay noqoto in qasaaro soo gaaray ganacsigaada iyo inkale. Waxaadna halkaasi ka qaadani kartaa saadaasha mustaqbalka soo socda. Xisaabta buugg-haynta ganacsiga waxaad si toos ah ugu heli kartaa saadaasha aad ku tilmaami karto ururkaada/shirkadaada.
Ogaaw mawduuceena kuma saabsano xisaabta buugg-haynta wuxuu ku saabsanyahay qeybaha kala duwan ee xisaabta ganacsiga “types of business account”. Hadaba maxay tahay ulla jeedka aan u sharaxaayo midaas? Waa muhiim inaan ogaano xaqiiqda waxaan ka hadli rabno.
Waxaan rabnaa inaan ka hadalno noocyada loo keediyo maaliyada ganacsiga iyo waxyaabaha ay ku kalla duwanyihiin. Xisaabaadka ganacsiga waxay u kalla baxaan seddax qeybood oo kale ah:
Xisaabaadka shakhsiga “personal account”
Xisaabaadka xaqiiqda/dhabta ah “real accounting” iyo
Xisaabaadka magacaaban “nominal account”
Waa qaabka diiwaanada xisaabaadka loogu keediyo si shaqsi ama koox ahaaneed. Dhinaca kalle haddii aan u qaado waa xisaab si u isticmaalaan shaqsi ahaan baahida qofka u gaarka ah. Waa xisaabta dhaqaalle ee banggiyadda iyo xisaabaadka adeega sidda shirkadaha teleefoonada ama emailada lagu bixiyo qarashka gaarka ah.
Xeerka xisaabta shakhsiga:
Debit (Dr.) Waa qofka helaayo
Credit (Cr.) Waa qofka bixinaayo
Xisaabaadka xaqiiqda “Real account”:
Waa xisaabaadka rasamaalka shirkada. Rasamaalka shirkada ha noqdo mid la taabani karo iyo mid aan la taabani Karin ”tangible and untangible assets”. Marka aan leeyahay wax la taabani karo iyo wax aan la taabani karin maxaan kala jeedaa?
Waxaan kala jeedaa makiinadaha ’machines’, dhismaha guryaha, iwm waa wax la taabani karo, waxaana afka ingiriiiska lagu yiraahdaa ’tangible assets’.
Waxyaabaha aan la taabani karin oo ah rasamaalka shirkada waxaa ka mid ah softweres-ka ay leedahay shirkada, niyad-samid ’Goodwill, shatiyada, magaca shirkada oo horumaray iwm.
Aqristoow waxaan u malaynayaa in waxyaabo qaar ay ku jiraan mugdi. Aniga inta badan shaqooyinka aan soo qabtay waxaan soo ahaa macalin, waana dareemi karaa waxa aan ka hadlaayo fahankiisa sidda aan usoo koobay inay kugu adkaani karayso, marka aan isku dayo inaan si fiican wax kuu fahansiini karo.
Waxyaabaha aan isleeyahay si fiican ayaad u sharaxday hadana mugdi ayaa ku jira waxaa ka mid ah sidda niyad-samid, shatiyada, magaca shirkada oo horumaray. Bal aan hal-hal u kala qaado. Haddii aan ka bilaabo:
Niyad-samid – eraygaan Afsoomaali ahaan dad badan wey fahmi karaan waxa lagala jeedo niyad-samid. Balse macnaha ay jumladaan ugu jirto waa maxay?
Macnaha guud ee ay jumlada ugu jirto ayaa ka duwan macnaha Afsomaaliga ee aad ugu malayni karto. Macnaha guud ee ay xambaarsan tahay ayaa ah ’shirkadaha waxay gaaraan heer loo yaqaano niyad-samid. Marka aan leeyahay niyad-samid, ma ahan eray aan horey afka Soomaaliga aan kusoo bartay ee waa eray aan isleeyahay wuu ku macno dhawyahay eraygaas cilmiyanka ah ee aad horey u taqaanay. Eraygaasi afka ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa ’Goodwill’ – ’niyad-samid.
Shirkadaha marka ay si wanaagsan ulla dhaqmaan macaamiisha, oo ay ku dadaalaan siddii ay u qancini lahayeen macaamiishooda waxay helayaan niyad-sami ka timaada xagga macamiisha. Shirkada waxayna ku xisaabtamaysaa in macaamiilkaasi soo noqoni doono haddii xittaa qiimaha kor u kaca. Sawabtoo ah waxaanu ogsoonahay macamiisha waxaa soo cel-celiya waa adeega wanaagsan.
Shatiyada shirkada waxaa Afka-ingiriiska lagu yiraahdaa ’patent’. Shirkada markii ay yeelato wax iyada oo kali qaas u ah oo aanan sameyni karin kuwa kalle, sidda shirkada Kodak. Shirkadaan Kodak waa shirkad Mareekan ah waxaa la aas-aasay sanadka markuu ahaa 1888. Waxay xarunteena ugu weyn ku talaa Rochester iyo New York.
Shirkadaan daqliga soo gala wuxuu garayaa lacag gaaraysa 1.798bilyan, waa tirokoobka ay ku sameyeen daqliga soo gala shirkada 2014-kii. Kodak waa shirkad teknooliji ah oo soo saarto sawiro qaab teknoloji ah ” basis on photography”. Waxaan jeclahay inaad fahantay waxyaabaha aan islahaa mugdi ayaa ku jira.
Waan dareemi karaa inay wali kugu adkaani karayso waxyaabaha aan sharaxaayo mise aadan horey ugu maqlin Afsoomaali ahaan. Aniga Cabduljabaar ahaan waxaan dareemayaa inay adagtahay in waxyaabaha qaar lagu sharaxi karo afka Soomaaliga sawabtuna waa, haddii aan nahay Soomaali inta badan mawduucyadaan waxbo kama qarno, ma nihin dad cilmiga wax ka qoro ee waxaan nahay dad inta badan wax ka qoro sheekooyinka, suugaanta, iyo gabayada.
Markale aan usoo noqdo mawduuceena’ Tusaale fiican oo ku saab-sab xeerka xisaabaadka dhabta/xaqiiqda ah. Waa kala duwanaanshaha u dhaxeeyo labada gud ee xisaabta dhabta ah. Waxaa ka mid ah sidda tan:
Debit Waxaa lagu cabiraa waxa soo galay shirkada.
Credit waxaa lagu cabiraa waxa ka baxay shirkada.
Waxaad kompuuter kusoo iibisay lacag dhan 1,000 Shilling Soomaali oo cadaan ah/kaash.
Account involved /Xisaabta ku lug leh Debit/Credit Rule Applied
Miis, table A/C Debit Miiska waa xisaabaadka xaqiiqda ah. Dr. waa waxa soo galay shirkada
To cash A/C Credit Cash-na waa xaqiiq, Cr. waa waxa ka baxay shirkada
Qeybtaan waa qeybta ugu dambeysay ee ahayd xisaabaadka magacaaban. Xisaabta magacaaban waxaa afka ingiriiska lagu yiraahdaa “nominal account”. Xisaabta magacaaban, waa xisaab la iskuwada ogyahay oo si toos u magacaaban sidda qarashaadka shirkada noocyadiisa kala duwan, qasaaraha iyo faa’idada shirkada.
Haddii aad qaamuuska ka raadiso erayga ‘nominal’ waxaad ka helaysaa in eraygaas yahay wax jira oo u taagan magic oo kali. ‘The dictionary meaning of the word “nominal” is “existing in name only”
Caadiyan waxaa tusaale u ah sidda Purchase A/C, Salary A/C, Sales A/C, Commission received A/C, iyo wixii la mid ah.
Xeerka dhabta ah ee xisabta magacaaban:
Debit: Dhammaan xisaabaadka kharashka iyo khasaaraha waxaa lagu qorayaa –Debit Account
Credit: Dhammaan xisaabaadka dakhliga iyo guulaha waxaa lagu qorayaa –Credit Account
Waxaa la iibsaday gaari, waxaana lacag cadaan ah lagu bixiyay: SSH 26,000,000
Koontada Debit ka
Sharciga la isticmaalay
La iibsaday A/C
Xisaabta magacaaban A/C, Debit dhammaan qarashaadka
Xaqiiqda A/C, Credit wixii dibida u baxay
Debit iyo Crebit waxaa labaduba lagu qori doonaa 26,000,000
Qeyb walbo oo ka midka xisaabaadka ganacsiga wuxuu leeyahay qaacido iyo xeerar loo maro. Qofka xisaabiyaha ah waa shaqsi la socdo dhaq-dhaqaaq dhaqaalle ee ay leedahay shirkada. Haddii aad ku riyoonayso inaad yeelato shirkad waa muhiim inaad waxyar xittaa ka fahansantahay xisabaadka ganacsiga. Maxaa yeelay kawaran haddii aad shirkadaada ku maalgeliso 1milyan adigana aad dayn kusoo qaadato 3milyan? Waa dhibaato.
Waa inaad ogtahay halka aad wax ku bixinayso iyo halka aad wax ka soo qaadayso. Xittaa maamulaha shirkada go’aan kama gaaro karo qorshaha shirkada ee sanadaha soo socdo. Waxaa wanaagsan in maamulaha shirkada marwalbo si joogta ah ulla socda waxa ka socda qeybaha maaliyada.
Qiima dhaca Shillin Soomaaliga waa mid walaac aad ah leh, wuxuuna keenayaa inuu kordho qiimaha badeecadda dibedda laga keeno oo ay ku jiraan cuntooyinka qaar iyo shidaalku. Saamaynta qiima dhaca Shillinka Soomaaligu wuxuu taabanayaa dhammaan bulshooyinka ku nool miyiga iyo magaalooyinkaba.
Qiimaha dhaca Shilling Soomaaliga waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin badan, waxayna si weyn u saameysay bulshada danyarta ah. Xaaladda xubinta cuntada iyo nafaqada ee dhulka xoola-dhaqatadu waxay tahay mid ka sii daraysa. Gobollada dhexe, xaaladda jidhka, wax-soo-saarka iyo qiimaha xooluhu waxay ku socota mid sii xumaanaysa, waxaana la soo sheegayaa in ay xoolo dhinteen daaqa oo gabaabsi ah iyo cudurrada oo sii kordhay dartood. Biyo yaridu waxay keentay in si buuxda looga guuray tuulooyinka qaar, iyadoo ay xoolaha iyo qoysasku isugu uruureen goobaha leh biyo joogto ah ama ceelal. Koonfurta waxaa ka jira hayaan aan caadi ahayn oo loogu guurayo dhulka webiyada.
Qaybo ka mid ah Togdheer, Sool, Sanaag iyo Nugaal, xiisad cusub ayaa ka soo shaac baxaysa roobka oo liitay darteed, taasoo keenaysa in dadku ay si aan caadi ahayn u guuraan iyo biyo dhaamis xilligiisii ka soo hor maray.
Dal sidiisaba wuxuu ku dhisanyahay dhaqaale, haddii la waayo dhaqaalo wax loogu qabto arrimaha bulshada waxaa adkaani karayso in bulshadaas ku noolaato nolosha ay u baahantahay. Waxaa jiray natiijooyin badan oo horey loo sameeyay oo ku saabsan nafaqo darada haysato ubadkeena iyo hooyooyinka. Natiijooyinka ka soo baxay 13 baaritaan oo nafaqada ah oo la sameeyey sannadkan 2008 waxay muujinayaan in xaaladda nafaqadu ay ka sii dartay qaybo ka mid ah gobollada Bakool iyo Gedo, goobahaas oo laga soo sheegay heerar Aad Halis u ah oo ka sarreeya 20% oo ah nafaqo darro xun. Heerarkaas Aad Halis u ah waxaa kale oo laga soo sheegay dadka ku barakacsan Galkacayo iyo Garoowe. Waxaa iyana walaac weyn laga qabaa gobollada dhexe ee abaartu saamaysay, goobahaas oo qiimayn degdeg ahi ay muujinayso inay sii kordhayso tirada carruurta ay nafaqo-darro xumi hayso, taasoo ay sii xaqiijiyeen heerarka sii kordhaya ee tirada carruurta la dhigo xarumaha quudinta iyo nafaqaynta. Tiradaas korortay waxaa kale oo ay ka muuqataa magaalooyinka sida Muqdisho, Wajid iyo Galkacayo.
F.G: Qoraalkaan ku saabsan nafaqo darada waa tiro koob horey loo sameeyay ee ma ahan wax waqti dhaw la sameeyay balse aad ayay u wanaagsantahay inaan isticmaalno tusaalooyin lawada ogyahay.
Soomaaliya waa qaran xaalad burbur ah ku sugan oo uu halakeeyey mid ka mid ah dagaalladii sokeeye ee dunida ugu foosha xumaa ee dhaca sanadihii dhowaa. Tan iyo 1991-kii dhicistii dawladdii Dhexe ee ugu dambaysey, Soomaaliya waxay ahayd dal lagu yaqaanney meel ay ka jiraan qalalaase iyo dagaallo joogto ah. Markii ay Ciidamada Itoobiya dalka faragelinta ku sameeyeen dabayaaqadii 2006-da, waxa horeba markaa dalka ka muuqday daqarradii 16 sano oo ay dawlad la’aan iyo dagaallo hareeyeen. Laakiin labadii sano ee ugu dambeeyey ma ahayn oo keliya qayb kale oo ka mid ah mashaakilaadkii hore loogu yiqiin taariikhda colaadda Soomaaliya. Masiibooyinka xuquuqda aadanaha iyo kuwa bani’aadannimo ee Soomaaliya maanta haystaa oo xaddigooda iyo heerka ay ku socdaanba aan la arkin tan iyo horraantii 90-meeyadii waa kuwo looga cabsi qabo inay galaafato nolosha iyo nolol maalmeedka malaayiin qof oo Soomaali ah.
Qiimaha shilling Soomaaliga waa wax loo baahanyahay in kor loo qaado si loo helo isbedel ku saabsan suuqyada dalka. Waxaan is dhihi karnaa isbedel dhaqaalo iyo horumarinta bulshada lama filani karo waqti dhaw illaa lalla yimaado aragti cadeynayso in lagu horumariyo shillin Soomaaliga.
Waxaan hadalkeyga kusoo koobaayaa Soomaaliya ma joogto waqti la daabaco lacag sawabtoo ah lacagta cusub markii la daabacaayo waxay u baahantahay in la tashi dheer la sameeyo qaasatan dadka qabiiriinta ku ah dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada iyo dalkuba.
Maxaa ugu muhiimsan dalkeena maanta? Waxaa ugu muhiimsan marka horre in la helo nabad, si nabad loo helo marka horre waa inay timadaa cadaalad iyo simnaanta dadka. Haddii dulmi meesha soo galana cadaalada ayaa ka baxda. Dulmigu waa wax kasta oo si aan ku haboonayn loola dhaqmay, cadaaladuna waa wax kasta oo sidii ku haboonayd loo la dhaqmay, waa isku cagsi.,Waxaa kale oo cadaalada muuqaaladeeda ka mida Sinnaanta, toosnaanta, miisaanaanta, haddii meesha sinaantu ka baxdo cadaaladi ma taalo, hadii toosnaani ka baxdana qalooc ayaa soo gelaya oo cadaaladi jirimayso, hadii miisaanka saxda ahi meesha ka baxana dheeli ayaa soo baxaya oo cadaaladi ma jirayso.
Qormadan waxeynu ku lafo guri doonaa waxey kala yihiin Sakada & Cashuurtu, farqiga u dhaxeeya iyo faa,iidooyinka ay leeyihiin labadaba.
Aynu ku horeyno Sakada, Sakadu waa waajib saaran qof kasta oo Muslin ah oo Miyirkiisa & Maankiisuba taam yihiin, sidoo kale waxa ay ka mid tahey tiirarka ay ku dhisan tahey diinta Islaamku, Sakadu waxey leedahay faa’iidooyin badan oo ay ka mid yihiin in naxariista adoomaha dhexdoodu badato, in qofkii hayntiisu fiicantahey uu kaga badbaado xaasidka iyo xasarada Hantidu keento mood iyo nood ba kay doonto ha ahaatee, sakadu waa waajib Alle (SW) kugu kor yeelay aduun iyo aakhirana abaal marinteeda marley waad la kulmaysaa, waxa ay ku waajibaysaa Hantidu markey gaadho in cayiman oo loogu talo galey.
Cashuurtu waa waajib ay soo rogaan dawladduhu kaasi oo ay shacabkooda ku kaabayaan baahiyaha aas aasiga ahna loogu qabto, way jiraan ciqaabo lagu soo rogo shakhsiga bixin waaya cashuurta balse wax aakhiro kuu raacaya oo lagugu yeelanayaa ma jirto, sidoo kalena cashuurta waxa laga qaada dakhliga, ganacsiyada iyo hantiyaha kale ee kala duwan iyadoo aan loo ee ah eegayn hayntaada.
Sakadu waxey si toos ah u gaadhaa hadba cidii loogu talo galey iyadoo quraanka iyo axaadiistaba ay ku cadahey qolyaha la siinayo, halka ay cashuurtu ku dhacdo qasnadaha dawladda siyaalo badana loo adeegsado oo aaney gaadhin meelihii loogu talo galey.
Umadda islaamka waxa haboon iney ku dadaalaan bixinta sakada iyo iney ka foojignaadaan iney la habsaamaan iskana iloobaan bixinteeda sababtoo ah waxa ku jirta liibaantooda If & Aakhiraba.